Hawaasa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 4:37 2 Sadaasa 20204:37 2 Sadaasa 2020
Namootni tokko tokko maaliif gocha gara-jabinaa namarratti raawwatu?
Namoonni ijoollee isaanii osoo hin hafiin namoota midhaa isaanirraan gahuu hin dandeenyerratti gocha gara jabinaa maaliif raawwatu? Ka'umsi isaa maali?
...tti maxxanfame 11:56 6 Fuulbaana 202011:56 6 Fuulbaana 2020
'Alaabaa keenya bilsoomsuuf ni qabsoofna'
Alaabaan uummata ganamaa Awustiraaliyaa (Aboriginals) halluun isaa Gurraacha, Diimaa fi Keelloodha. Gurraachi uummata, diimaan hariiroo dachee waliin qaban, akkasumas keelloon gidduutti argamtu ammoo biiftuu bakka bu'u.
...tti maxxanfame 5:08 24 Waxabajjii 20205:08 24 Waxabajjii 2020
Jiraattota Shebel maaltu qe'eerraa buqqise? Amma akkamiin jiru?
Godina Qellam Wallaggaa Aanaa Anfilloo Ganda Shebel jedhamtu keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin kanneen baqatanii naannoo Gambeela jiran rakkoo hamtuutu harkaa nu qaba jedhu.
...tti maxxanfame 4:53 18 Waxabajjii 20204:53 18 Waxabajjii 2020
''Maanguddoon kun boo'ichaaf rakkoosaanii nutti himaachuu dadhaban''
Giddu-galli Qorannoo Qonnaa Hoolataa Godina Wallaggaa Lixaatti jiraataa aanaa Gullisoo kan ta'an maanguddoo Tamasgeen Abbulee jedhaman kan tibbana suuraan isaanii miidiyaa hawaasummaarra naanna'aa tureef sa'a aannanii arjoomeef.
...tti maxxanfame 8:07 18 Guraandhala 20208:07 18 Guraandhala 2020
Jiraattuu magaalaa Gondar kan tahan Aadde Shaashituu Nugusee mana lammii Eeritiraa kan waggaa 20'f imaanaadhaan eegan deebiisanii gatii kiraa isaa waliin hadhaa manichaatiif kennuufi.
...tti maxxanfame 10:07 17 Guraandhala 202010:07 17 Guraandhala 2020
Yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e barattoonni akka gara maatiisaaniitti galan murteessuu isaa Yuuniversitiin Miizaan Teeppii beeksise.
...tti maxxanfame 5:35 30 Sadaasa 20195:35 30 Sadaasa 2019
Ijoolleen himannaa abbaa waggaa sagaliif isaan uggureerratti wal dhaban
Ijoolleen himannaa abbaa nama Dachi kan ijoolleessaa waggaa sagaliif 'dhuufaatii Gooftaa eegganna' jechuun kutaa dhoksaa keessa isaan uggure irratti baname irratti wal-falman.
...tti maxxanfame 7:16 23 Fuulbaana 20197:16 23 Fuulbaana 2019
Hanqinni bishaanii, boba'aafi kanniisa dammaa mudachaa akka jiru dhala namaa hundaafuu ifa, garuu qabeenyi dhalli namaa utuu hin beekin dhabaa jiru hedduudha. Kanneen keessaa ja'an isaanii kunooti.
...tti maxxanfame 10:46 27 Adooleessa 201910:46 27 Adooleessa 2019
Barbaachisummaa Jaarmiyaalee hawaasaa cimsuu mataduree jedhurratti haasaa kan godhan Pirof. Asaffaa Jaallataa, Uummatni Oromoo jaarmiyaa hawaasaa cimaa dhabuusaaf rakkooleen alaafi keessoo sababa ta'us himan.